Chelsea oo dooneysa in ay ka dulqaado Man United da,yarka reer Ecuador
Home Horyaalka Ingiriiska Chelsea oo dooneysa in ay ka dulqaado Man United da,yarka reer ...
Chelsea ayaa ah kooxdii ugu dambeysay ee muujisa xiisaha 19-jirka reer Ecuador ee caanka ah Moises Caicedo, kaasoo sidoo kale ay isha ku heyso Manchester United.
Red Devils ayaa la rumeysan yahay inay ‘hogaamineyso loolanka’ loogu jiro Independiente del Valle whizkid, kaasoo horeyba u ahaa caalami buuxa oo heer sarre ah waxaana la filayaa inuu dalbado lacag ku dhow m 4.5m.
Waa taageere United waxaana macquul ah inuu u wareego Old Trafford, laakiin Daily Mail ayaa rumeysan in kooxda Frank Lampard ay ka fiirsaneyso inay u soo bandhigto ciyaaryahanka fursad uu ku aado Stamford Bridge.
Kooxda indha indheeyayaasha ee Chelsea ayaa isha ku haysay in muddo ah Moise waxaana saraakiisha kooxda la sheegay inay wadahadalo la yeesheen dhex dhexaadiyeyaasha sidii ay dalab uga gudbin lahaayeen da ‘yarka rajada leh.
Xiddiga khadka dhexe ee tayada leh ayaa sidoo kale xiiso u leh kooxaha sida Brighton iyo Newcastle, halka sidoo kale la fahamsan yahay inuu xiiseynayo dhul weynaha Yurub, halkaasoo AC Milan iyo RB Leipzig loogu magac daray inay doonayaan.
Xilligii Frank Lampard, Blues waxa ay dhistay sumcad ay ciyaartoy da ‘yar ah ku soo kordhisay kooxda waayeelka ah, iyada oo ay ka mid yihiin Reece James, Mason Mount iyo Tammy Abraham oo dhammaantood ku soo kordhay xiddigo hoos yimaada tababbarkii Frank, waddadaas kooxda koowaadna waxay noqon kartaa mid soo jiidasho leh ee Moises.
Dhanka kale, kooxda Napoli ayaa kula soo biirtay kooxda Inter Milan loolanka loogu jiro helitaanka Emerson Palmieri, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday Forza Italian Football.
Chelsea ayaa laga yaabaa inay iska iibiso daafaca bidix suuqa kala iibsiga bisha Janaayo iyadoo Lampard uu u baahan yahay inuu yareeyo kooxdiisa.
Dagaal u dhexeeya labada kooxood ee Serie A ee Emerson ayaa gacan ka geysan doona keenista lacagaha loogu talagalay qorshooyinka qorista ee Blues.
Previous articleAC Milan oo uvdhaqaaqday Saxiixa Daafaca Kooxda Chelsea Fikayo Tomori
Next articleManchester United oo raadineysa in ay iska ilaaliso Barbareynta Rikook 53 sano jirsaday Kulanka Burnley